ဂျာနယ်လစ်တွေနဲ့ အင်တာဗျူး မှာ ၀က် ကလေးကို နို့ တိုက်ပြလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက် | Buzzy
မိုးရွာပြီးရေကြီးနေတဲ့ ဒေသမှာ ၀က်ကလေးကို လူနို့ တိုက်မွေးနေရ
အမေရိကန် TV ဂျာနယ်လစ်တွေဟာ Peru မှာ ရှိတဲ့ Limaဒေသကို မိုးရွာသွန်း မှု လွန်ကဲပြီး ရေလွှမ်း မိုး မှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေ လည်ပတ်နေမှုအကြောင်း အင်တာဗျူးမေးဖို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက် ဟာ အင်တာဗျူး ဖြေရင်းနဲ့ဝက်ပေါက်လေးတစ်ကောင်ကိုပွေ့ ချီထားပါတယ်။
မိုးရွာ ပြီးရေကြီးနေတာဖြစ်လို့ ၀က်ကလေးကို ဂရုတစိုက်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာလို့ထင်ရပါတယ်။
အမရေိကနျ TV ဂြာနယျလဈတှဟော Peru မှာ ရှိတဲ့ Limaဒသေကို မိုးရှာသှနျး မှု လှနျကဲပွီး ရလှေမျး မိုး မှုတှကွေောငျ့လုပျငနျးတှေ လညျပတျနမှေုအကွောငျး အငျတာဗြူးမေးဖို့ ရောကျရှိလာခဲ့ကွတာပါ။အဲ့ဒီအငျတာဗြူးမှာ အမြိုးသမီးကွီးတဈယောကျ ဟာ အငျတာဗြူး ဖွရေငျးနဲ့ဝကျပေါကျလေးတဈကောငျကိုပှေ့ ခြီထားပါတယျ။
မိုးရှာ ပွီးရကွေီးနတောဖွဈလို့ ဝကျကလေးကို ဂရုတစိုကျပွုစုစောငျ့ရှောကျနတောလို့ထငျရပါတယျ။
အမျိုးသမီးကြီးဟာ အင်တာဗျူး ဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တရက် ၀က်ကလေးကို နို့ တိုက်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ သတင်းထောက်တွေရော အခြား သူတွေပါ အံသြစွာနဲ့ တွေမြင်ခဲ့ကြတာကတော့ ၀က်ကလေးက မိန်းမကြီးရဲ. နို့ ကိုစို့ နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။လူတွေအများကြီးကလည်းအံ့သြစွာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ. TV သတင်းထောက်
တွေဟာလည်း ချက်ချင်း ဆိုသလို အမိအရ ကင်မရာ နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။မိုးရွာပြီးရေကြီးနေတဲ့ဒေသမှာ ၀က်ကလေးကို လူနို့ တိုက်ပြီး မွေးမြူ နေတာလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
အမြိုးသမီးကွီးဟာ အငျတာဗြူး ဖွပွေီးတဲ့အခြိနျမှာ ရုတျတရကျ ဝကျကလေးကို နို့ တိုကျလိုကျတာပါ။အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ သတငျးထောကျတှရေော အခွား သူတှပေါ အံသွစှာနဲ့ တှမွေငျခဲ့ကွတာကတော့ ဝကျကလေးက မိနျးမကွီးရဲ. နို့ ကိုစို့ နခေဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။လူတှအေမြားကွီးကလညျးအံ့သွစှာတှမွေ့ငျခဲ့ကွပွီး အမရေိကနျနိုငျငံရဲ. TV သတငျးထောကျ
တှဟောလညျး ခကျြခငျြး ဆိုသလို အမိအရ ကငျမရာ နဲ့ ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။မိုးရှာပွီးရကွေီးနတေဲ့ဒသေမှာ ဝကျကလေးကို လူနို့ တိုကျပွီး မှေးမွူ နတောလို့ ဆိုရပါလိမျ့မယျ။